Uhlelo lokubambisana lwesitolo se-intanethi ye-hormone yokukhula eThailand
Ungajoyina kanjani uhlelo lwethu lokubambisana?
- Okokuqala udinga Xhumana nathi bese uthole i-akhawunti yomlingani
- Ngemuva kokubhalisa, uzothola ikhodi ekhethekile kumakhasimende akho. Ngemuva kokudayiswa ngakunye, uthola ikhomishini yakho kusuka ekuthengisaneni nekhasimende
Kungani kufanele ngijoyine uhlelo lomlingani?
- Yenza imali yangempela kanye nathi!
- Thola izaphulelo ezikhethekile kubalingani emikhiqizo yethu
- Thola ukufinyelela ku-wholesale
- Namanje ucabanga? Joyina manje!